दुवै डोज खोप लगाउनेलाई इन्फेक्सन हुने खतरा ६० प्रतिशत कम - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार दुवै डोज खोप लगाउनेलाई इन्फेक्सन हुने खतरा ६० प्रतिशत कम
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएपछि पनि कोरोनाको इन्फेक्सन भएको पाइएको छ । यसलाई वैज्ञानिकहरुले ‘ब्रेकथ्रु इन्फेक्सन’ को नाम दिएका छन् । भारत, अमेरिका लगायत विश्वका थुप्रै देशहरुमा यस्तो अवस्था आएको छ । खोपको दुवै डोजपछि पनि भाइरसको संक्रमणले गम्भीर बिरामी बनाउने र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था समेत आएको छ । ‘ब्रेकथ्रु इन्फेक्सन’ रोक्नका लागि इजरायल लगायत केही देशहरुले बुस्टर डोज पनि लगाउन सुरु गरिसकेका छन् ।
तर, कति प्रतिशत मानिसहरुलाई खोपको दुवै डोज लगाएपछि पनि इन्फेक्सन हुने खतरा छ त ? यसको उत्तर नयाँ अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । बेलायतमा गरिएको एक अनुसन्धानले दुवै डोज खोप लगाएपछि कोरोना संक्रमण हुने खतरा ६० प्रतिशत कम हुने उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ अध्ययनको नतिजाले के भन्छ ?
बेलायतको नयाँ अध्ययनले १६९ जनामध्ये एक व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भयो । जसले दुवै डोज खोप लगाएका थिए तिनीहरुमा प्रिभिलेन्स रेट ०.०४ प्रतिशत छ । अर्थात, १०० मा ४० प्रतिशतमा भाइरसको इन्फेक्सन भयो । त्यसैले, औषतमा तीन व्यक्ति मध्ये एक जनामा भाइरसको इन्फेक्सन हुने खतरा धेरै छ ।
उक्त अध्ययनले खोप नलगाउनेभन्दा लगाउनेलाई कोरोनाको खतरा ६० प्रतिशत कम हुन्छ । यसमा एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्सन सामेल हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुमा प्रिभिलेन्स रेट १.२१ प्रतिशत हुन्छ । अर्थात उनीहरुमा संक्रमित हुने खतरा खोप लगाएकाभन्दा तीन गुणा बढी हुन्छ ।
बेलायत सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि लगाएको प्रतिबन्ध जुलाई १९ बाट खुकुलो बनाएको छ । बन्द कोठाभित्र मास्क लगाउने नियम पनि कतिपय क्षेत्रमा हटाइएको छ । यसपछि मे र जुनको बीचमा संकलन गरिएको नमुनाहरुमा इन्फेक्सन रेट ०.१५ प्रतिशत थियो जुन नयाँ अध्ययनमा चार गुणा बढेर ०.६३ प्रतिशत पाइएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले जुलाईमा संक्रमणदर कम भएको दाबी गरेका छन् ।
के खोप लगाएका व्यक्तिहरु संक्रमित हुँदा भाइरस फैलन्छ ?
उक्त अध्ययनले कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाएका व्यक्तिहरु संक्रमित भएमा भाइरस फैलने खतरा हुँदैन । बेलायतको एक अध्ययनले दुवै डोज खोप लगाएका ३.८४ प्रतिशत मानिसहरुले पछिल्लो केही दिनमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा आएका थिए । जो इन्फेक्सनका कारण बने । उता, कोभिड–१९ संक्रमित व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा आएको दाबी गर्नेहरुमध्ये कोरोनको खोप लगाउनेको संख्या ७.२३ प्रतिशत थियो ।
उक्त अध्ययनको सर्भे कार्यक्रमका निर्देशक तथा इम्पीरियल स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका प्राध्यापक पोल एलियटले कुनै पनि खोपले भाइरसको संक्रमणबाट शतप्रतिशत बचाउन नसक्ने बताए । उनले खोप लगाएका व्यक्तिहरु पनि संक्रमित भएको र सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
के संक्रमण रोक्न खोप प्रभावकारी छैन ?
पब्लिक हेल्थ इंग्ल्याण्ड (PHE) को डाटाले दुवै डोज खोप लगाउनेहरुलाई संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति फाइजर खोप लगाउनेलाई ९६ प्रतिशत र कोभिडसिल्ड लगाउनेलाई ९२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको पाइएको जनाएको छ ।
पीएचइका अनुसार खोपका कारण बेलायतमा २.२ करोड व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमित हुनबाट बचेका छन् । यसका साथै, ५२,६०० अस्पताल भर्ना हुनबाट र ३५,२०० देखि ६० हजार मृत्युबाट बचेका छन् ।
जुन २१ देखि जुलाई १९ को बीच पीएचइ हस्पिटलाइजेसन डाटाका अनुसार १ हजार ७८८ मानिसहरु डेल्टा भेरियन्टबाट संक्रमित भएपछि हस्पिटल भर्ना भए । यसबाट ९७० (५४.३ प्रतिशत)ले खोप लगाएका थिएनन् । जसमा ५३० (२९.६ प्रतिशत) ले खोप लगाएका थिए ।
अब कोरोनाको ‘टाग्रेट’ को ?
विश्वभरका १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका करिब २८ लाख मानिसहरुले कोरोनाको खोप लगाएका छैनन् । ती युवाहरुमा गम्भीर लक्षण देखिने डर कम हुन्छ तर ती संक्रमितहरुबाट अरु व्यक्तिहरुमा फैलने खतरा भने बढी हुन्छ ।
इम्पीरियल कलेज अफ लण्डनको उक्त अध्ययनको अनुसार ७५ वर्षभन्दा कम आयु ग्रुपमा भाइरसको इन्फेक्सनको खतरा बढी हुन्छ । १३ देखि १७ वर्षका ग्रुपमा प्रिभेलेन्स नौ गुणा बढी भएको छ । जुन मे र जुनको सर्भेमा ०.१६ प्रतिशत जुन बढेर १.५६ प्रतिशत भएको छ ।
Previous articleबार्सिलोनाबाट बाहिरिएका मेस्सीको अबको यात्रा कता ? यी हुन् सम्भावित क्लब
Next articleडा गोविन्द केसीको चेतावनी: आफ्ना माग पुरा नभए भदौ ३ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने